Myers သည် PBS TechCon 2015 အတွက်အစီအစဉ်များကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Myers PBS TechCon 2015 အဘို့အစီစဉ်ကြေညာ
Northampton, MA မတ်လ 31, 2015 - Las Vegas မှာကဲသာဘုရင်၏နန်းတော်မှာ 8, 10 - Myers, ထုတ်လွှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကိုတစ်ဦးလေးစားပြုစုသူ, သူတို့ကတစ်ဦးငွေအဆင့် PBS TechCon, ဧပြီ 2015 မှာကိုပံ့ပိုးဖြစ်ကြောင်းကြေငြာလိုက်သည်။ PBS TechCon အများပြည်သူရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များပညာရေး, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး, နှင့်နည်းပညာမှတဆင့်အသစ်သောအတွေးအခေါ်များမျှဝေဖို့အတူတူလာရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ယခုနှစ်တွင် Myers သူတို့ရဲ့ ProTrack အသံလွှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များအတွက်နည်းပညာအသစ်ပလက်ဖောင်းတစ်ဦး preview ကိုဝေမျှဖို့စီစဉ်ထားနှစ်ယောက်ညီလာခံအစည်းအဝေးများဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
ဧပြီလ 8th တွင်, Myers လို့ခေါ်တဲ့သီးသန့် session ကိုစပွန်ဆာပါလိမ့်မယ် ProTrack Boot Camp ဘယ်မှာထုတ်ကုန်အထူးကုသူတို့ရဲ့ ProTrack ဆော့ဖ်ဝဲစနစ်တိုးမြှင့်ဖို့အသုံးပြုသူများအတွက်နည်းလမ်းတွေကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဧပြီလ 10 အပေါ်th, Crist Myers, CEO နဲ့ Tracy Carter က, CTO, ဆိုတဲ့ session ကိုဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ် နယူး Trends နှင့်အတူနယူး Workflows လာ, သူတို့အနေနဲ့အစဉ်အဆက်-ပြောင်းလဲနေတဲ့မီဒီယာရှုခင်းအတွက်အရှိန်အဟုန်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်နည်းပညာရဲ့အခန်းကဏ္ဍအပေါ်မဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးလိမ့်မယ်တဲ့။ ဆွေးနွေးချက် ProTrack ရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေသောနည်းပညာ, ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလမ်းပြမြေပုံအသစ်မိတ်ဖက်များနှင့်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စွမ်းရည်များပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Myers Booth အတွက်ပြပွဲတစ်လျှောက်လုံး #311, အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များမကြာမီ-to--ဖြန့်ချိလိမ့် Accounts ကို receiver (AR) module မှာအစောပိုင်းတစေ့တစောင်းပေးသွားမှာပါ, ပထမဦးဆုံး ProTrack add-on ကိုသစ်ကိုနည်းပညာပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ကာ HTML5 Front-အဆုံး featuring ။ အဆိုပါနည်းပညာအသစ်ပလက်ဖောင်းရှေ့ဆက်ရွေ့လျားသိသိသာသာတိုးချဲ့စွမ်းရည်နှင့်တိုးမြှင့်ထိရောက်မှုနှင့်အတူဖောက်သည်များကိုပါလိမ့်မယ်။
PBS TechCon, အဆက်အသွယ်မှာသရုပ်ပြသို့မဟုတ်အသစ် preview ကိုအချိန်စာရင်း [အီးမေးလျ protected]။ Myers အလည်အပတ်ခရီးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် www.myersinfosys.com/pbstechcon2015/.
1982 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Myers လျှင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်နေသောမီဒီယာရှုခင်းအဘို့အထုတ်လွှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ Myers '' ကျယ်ပြန့်ဒိုမိန်းအသိပညာနှင့်စနစ်များပေါင်းစည်းမှုကျွမ်းကျင်မှုမျိုးစုံဌာနများနှင့်စနစ်များကိုဖြတ်ပြီးဖြန့်ဖြူး Workflows မောင်းပေးတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ် suite ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးချနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသော, အရွယ်မှာထုတ်လွှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်မှအကျိုးကြီးမားပြီးသေးငယ်တဲ့မီဒီယာအဆောက်အဦ, သူတို့ကိုစစ်ဆင်ရေးထိရောက်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီခြင်း။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး: www.myersinfosys.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-03-31
ယခင်: Pronology ရဲ့ပေးခဲ့သည်ပလက်ဖောင်းအဆင့်မြင့် Metadata လုပ်ဆောင်မှု Features
နောက်တစ်ခု: 4K အပေါ်မီးမောင်းထိုး - Rohde & Schwarz ဟာ high-resolution စံဖို့ NAB 2015 မှာယင်း၏ထုတ်ကုန် Portfolio ခွငျး